Shiinaha Soosaarayaasha bacda qashinka lagu ridi karo iyo alaableyda | Boorsooyinka Lead
Bacda qashinka lagudaadiyo ee ladaadin karo oo aan lahayn wax caag ah ingredients
Bacaha wasakhda ah ee wasakhda lagu daadin karo wasakhda iyo walxaha loo aqoonsaday inay yihiin kuwo nafaqeysan iyadoo la raacayo heerka yurubiyanka EN 13432. Adiga oo u adeegsanaya bacaha agabyada bey'ada u fiican waxaad ku tusi kartaa adduunka dibadiisa iyo macaamiishaada inaad leedahay muuqaal cagaaran oo aad taageereyso horumar waara.
Haddii ay dhacdo inaad u baahato bacaha qashinka lagu ridi karo ee leh naqshad iyo astaamo kuu gaar ah, Leadpacks ayaa kaa caawin kara. Waxaan ku siinaa bacaha cabbirro kala duwan, qaabab iyo dhumuc si ay ugu habboonaadaan baahiyaha oo dhan. Waxaan ku dari karnaa astaamo, sawirro ama fariimo kale oo ku wajahan astaan ​​muuqaal. Boorsooyinka isdaba-marin kara ee biodegradable waxaa lagu daabacaa ilaa 4 midab oo ku yaal labada dhinac.
Boorsooyinka Qashinka lagu Darsado ee Nolosha Dadku u dhexeyso waa 10-12 bilood.
Magaca Shayga Bacda Qashinka lagu Daro
Waxyaabaha QAADASHADA / PBAT / Galaarka Galayda
Codsiga Qashinka / Dib u warshadeynta, iwm
Waxaan markhaati ka nahay xiisaha sii kordhaya ee yareynta isticmaalka caagagga dhaqameed, labadaba macaamiisha iyo, gaar ahaan, siyaasiyiinta sidoo kale. Dhowr wadan ayaa horey u soo saaray mamnuucida guud ee bacaha. Isbeddelkani wuxuu ku sii fidayaa adduunka oo dhan.
Boorsooyinka Leadpacks-ka ee ku jira 100% waxyaalaha la baabi'in karo iyo kuwa la kariyo ayaa wax ka tari kara astaanta cagaaran ee shirkadda iyadoo isla markaasna si firfircoon uga caawineysa hagaajinta deegaanka. Adiga oo leh damiir wanaagsan, waxaad u isticmaali kartaa bacda qashinka lagudaadin karo ujeedo kasto oo aad ku bacrimin kartaa isticmaalka kadib.
Bacda qashinka lagu daadin karo ayaa ku saleysan qeyb weyn oo ka mid ah kheyraadka dib loo cusbooneysiin karo ee ka yimaada qalabka dhirta ku saleysan. Tan macnaheedu waa wax ka yar CO2 ayaa lagu sii daayaa cimilada, maaddaama ay dhirtu nuugayso CO2 markay korayaan, taas oo ka dhigaysa mid aan saamayn ku yeelanayn deegaanka marka loo eego soo saarista caag saliidda ku saleysan.
Hore: Bacda Flat-ka-baaba'a
Dambiisha Qashinka ee u Nugul Kara
Boorsooyinka Qashinka lagu Daro
Boorsooyinka Qashinka Caaga ah